Fonon-tanana Nitrile Examination
Sarin-tànana fanadinana latabatra
Fonon-tanana fanadinana vinyl
Saron-tava NIOSH Dust Mask N95 azo aforitra
Sarontava fandidiana azo alefa (510K)
Akanjo fanokanana azo alefa
Akanjo fandidiana fitsaboana
Akanjo fanokanana fitsaboana azo alefa
Inona no maha samy hafa ny fonon-tànana nitrile sy fonon-tànana latina?
avy amin'ny admin tamin'ny 21-08-03
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fonon-tànana nitrile sy fonon-tànana latina dia miankina indrindra amin'ny akora samihafa sy ireo fananana miaro amin'ny vokatra samihafa. Ao anatin'ny tontolo manokana, naratra ireo mpandraharaha noho ny tsy fanaovan'izy ireo manao fitaovam-piarovana manokana na fiarovana tsy ampy, ary ny sasany amin'ireo ...
Inona no maha samy hafa ny "fonon-tànana nitrile, fonon-tànana PVC ary fonon-tànana vita amin'ny fingotra"?
avy amin'ny admin tamin'ny 21-07-05
Satria ny fonon-tanana azo ampiasaina dia azo zaraina ho fonon-tànana vita amin'ny fingotra nitrile, fonon-tànana PVC ary fonon-tànana latina voajanahary araka ny fitaovana. Ka inona no mahasamihafa azy ireo? A, ny fitaovana tsy mitovy 1. fonon-tànana vita amin'ny rongony nitrile: ny fitaovana dia NBR karazana fingotra butadiene, ny singa fototra ...
Ny vokatry ny fahamendrehan'ny bobongolo amin'ny famokarana fonon-tanana vita amin'ny latex
Niely be erak'izao tontolo izao ny coronavirus vaovao, nisy ny fitaky ny fitaovam-piarovana, indrindra ny saron-tava fiarovana sy fonon-tanana vita amin'ny voajanahary. Amin'ny maha iray ny fepetra fiarovana lehibe, ny fonon-tanana vita amin'ny laoniny voajanahary dia afaka manome fiarovana tsara sy isolati ...
Inona ireo fonon-tanana nitrile? Inona no maha samy hafa ny fonon-tànana nitrile sy fingotra?
tamin'ny admin tamin'ny 19-06-03
Ny fonon-tanana Nitrile, izay antsoina indraindray hoe fonon-tànana nitrile, dia fonon-tànana fiarovana sy fiarovana vita amin'ny akora vita amin'ny nitrile, miaraka amin'ny fanoherana tsara ny akora simika biolojika, ny fizika tsara, ny toetra anti-static, ny endrika mampahazo aina, ary matetika ampiasaina amin'ny ozinina fitaovana, fizaham-pahasalamana, sakafo enterpri ...
Ny laboratoara ampiasaina amin'ny fikarohana siantifika dia misy endrika maro noho ny tsy fitovizany. Manome fahaiza-manao fantsona feno izahay.
Anglisy ： +8613552231037
sinoa ： +8613552231037